Sida mashiinka CNC u shaqeeyo iyo codsiyada | qalab bilaash ah
Sida mashiinka CNC u shaqeeyo iyo codsiyada
Mashiinnada CNC ee meel walba yaalla waxay ku jiraan warshado iyo aqoon-is-weydaarsiyo badan oo nooc kasta ah. Faa'iidooyinkooda cajiibka ah waxay ka dhigeen ku dhawaad ​​mashiinnada lagama maarmaanka u ah qaybaha mashiinnada. Hadda oo aad ogtahay waxa ay yihiin mashiinada noocaan ah, kuwan soo socda ayaa ah ogow sida mashiinka CNC u shaqeeyo, sida qaybaha loo farsameeyo, luqadda programming-ka ee ay isticmaalaan, iyo sidoo kale codsiyada ugu badan ee mishiinadan.
1 Sida mashiinka CNC u shaqeeyo: CNC ama mashiinka xakamaynta tirada
1.1 Xakamaynta dhaqdhaqaaqa
1.2 Qalabka barnaamijka
1.3 Barnaamijka CNC
1.3.1 Luqadda APT
1.4 Xakamiyaha CNC
1.5 Barnaamijka CAM / CAD
1.6 Nidaamka DNC
2 Codsiyada mashiinka CNC
2.1 Madadaalada (DIY iyo sameyeyaasha)
2.2 Aqoon-is-weydaarsiyo iyo warshadaha wax-soo-saarka
2.3 warshadaha elektarooniga ah
3 Macluumaad dheeraad ah
Sida mashiinka CNC u shaqeeyo: CNC ama mashiinka xakamaynta tirada
Laga soo bilaabo CAD (Naqshadaynta Kombuyuutar-ku-caawiyey ama Naqshad Kaalmayn Kombuyuutar) ama CAM (wax-soo-saarka Kombuyuutar-ku-caawiyey ama Wax-soo-saarka Kombiyuutarka), nashqadaha qaarkood codes akhriska ama luqadda kaas oo mashiinka CNC uu awood u yeelan doono inuu raaco waddooyinka ama dhaqdhaqaaqa loo calaamadeeyay mashiinnada qaybta hab habboon si natiijada la rabo loo helo. Taasi waa, si dhamaadka habka, qaybtu waxay la mid tahay midka naqshadeynta kombiyuutarka.
Si kale haddii loo dhigo, mahadsanid code-yadan ayaa suurtagal noqon doonta madaxa ku dhaqaaji qalabka shaqada iyada oo loo marayo faashashka mishiinka. Dabcan, qalabku wuu ka duwanaan karaa hal mashiin ilaa mid kale, qaar xitaa waxay leeyihiin madax qalab badan si ay u beddelaan inta u dhaxaysa dhowr waxayna bixiyaan dabacsanaan weyn oo shaqo. Tusaale ahaan, waxaa jiri kara qalabka wax lagu gooyo, qalabka wax lagu qodo, shiididda ama qalabka leexinta, alxanka, qalabyada meelaynta, iwm.
Mashiinnada CNC waxay leeyihiin laba ciwaan ama in ka badan oo barmaamij laga samayn karo. Guud ahaan waxaa jira 3 (X, Y, Z), inkastoo mararka qaarkood ay heli karaan in ka badan sidaan ku soo aragnay maqaalkii hore, marka lagu daro ogolaanshaha wareegyada ( faashashka wareega waxaa loo yaqaan A, B, C). Iyada oo ku xidhan tirada faashash, waxaad samayn kartaa wax ka badan ama ka yar mashiinada adag. Faasas badan, ayaa sii kordhaysa heerka xorriyadda dhaqdhaqaaqa, markaa waxay samayn kartaa sawirro aad u adag.
para xakamaynta dhaqdhaqaaqa Faasaskan, laba nooc oo habab ah ayaa la isticmaali karaa kuwaas oo si gaar ah ama wadajir ah u shaqayn kara:
Qiimaha saxda ah (code G90)Xaaladdan oo kale isku-duwayaasha barta loo socdo waxaa loo tixraacaa meesha asalka ah ee isku-dubaridyada. Doorsoomayaasha X (cabbirka dhexroorka ugu dambeeya) iyo Z (qiyaasta jihada barbar socota dhidibka wareegtada dunta dunta) ayaa la isticmaalaa.
Qiimaha korodhka ah (code G91): Xaaladdan kale isku-duwayaasha barta loo socdo ayaa loo tixraacayaa barta hadda jirta. Doorsoomayaasha U (masaafada shucaaca) iyo W (oo lagu cabbiray jihada barbar socota dhidibka wareegtada dunta dunta) ayaa la isticmaalaa.
Kaliya marka la haysto xakamaynta dhaqdhaqaaqa mashiinka CNC lama isticmaali karo. Sidaa darteed, mashiinnada waa in siyaabo kale loo habeeyaa. Nooca mashiinka CNC, dhab ahaantii, wuxuu si dhow ula xiriiraa nooca qalabyada barnaamijka ee uu leeyahay. Tusaale ahaan, mishiinada gudaheeda waxa aad yeelan kartaa hawlo gaar ah oo la qorsheeyay sida:
isbeddelka qalabka: qaar ka mid ah xarumaha mishiinada qalabka badan. Madaxa qalabka waxa loo habayn karaa in uu isticmaalo qalabka lagama maarmaanka ah xaalad kasta iyada oo aan loo baahnayn in gacanta lagu dhejiyo dunta.
Xawaaraha lafdhabarta iyo hawlgelintaXawaaraha Spindle-ka ee kacaanka daqiiqadii (RPM) ayaa sidoo kale la qorsheyn karaa, oo ay ku jiraan jihada wareega (Saacadaha ama ka soo horjeeda), iyo sidoo kale joogsiga ama dhaqdhaqaaqa.
Qaboojiyaha: Mashiinno badan oo ka shaqeeya walxaha adag, sida dhagaxa ama birta, waxay u baahan yihiin qaboojiye si aanay u kululayn. Qaboojiyaha waxa kale oo lagu habayn karaa inuu shido ama damiyo inta lagu jiro wareegga shaqada.
Mashiinnada CNC waa la borogaraamayn karaa, sida la arkay, laakiin sidaas ayay sameeyaan habab kala duwan taas oo ay tahay inaad ogaato markaad la shaqaynayso mid ka mid ah:
Buugga: Gelida macluumaadka aad rabto degdeg ah. Si taas loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado nambarka alfanumeric ee la habeeyey, sida kuwa DIN 66024 iyo DIN 66025.
Otomaatiga ah: waa kiiska ugu badan ee hadda jira, waxaana lagu fuliyaa kombuyuutar ku xiran mashiinka CNC. Qofku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu wax ka beddelo xogta iyada oo loo marayo software, isaga oo aan u baahnayn inuu ogaado koodka, maadaama barnaamijka laftiisa uu mas'uul ka noqon doono u tarjumidda tilmaamaha la fahmi karo ee mashiinka CNC. Tan waxaa lagu sameeyaa luqad la yiraahdo APT, taas oo iyana loo tarjumi doono binary (eber iyo kuwa) si mashiinka CNC ee microcontroller uu u fahmo oo u tarjumo dhaqdhaqaaq.
Hadda, waxaa sidoo kale jira mashiinno kale oo CNC ah aad u horumarsan oo sahlan in la isticmaalo, sida kuwa iswada ee laga yaabo inay u baahdaan faragelin ka yar xitaa bini'aadamka.
Tusaalaha barnaamijka CNC. Xigasho: Researchgate
Waxa loogu yeero barnaamijka CNC, kaas oo ku qoran a luqadda heerka hoose ee G iyo M (oo lagu jaangooyay ISO 6983 iyo EIA RS274) oo ka kooban:
G-koodkaTilmaamaha dhaqdhaqaaqa guud. Tusaale ahaan, G waxa uu hore u socon karaa, u dhaqaaqi karaa shucaac, hakad, wareeg, iyo wixii la mid ah.
M-Cods: oo aan u dhigmin dhaq-dhaqaaqyo ama noocyo kala duwan. Tusaalooyinka M waxa ay noqon karaan bilaabista ama joojinta dunta dunta, beddelka qalabka, codsanaya qaboojiyaha, iwm.
N: barnaamijku waxa uu u qaybsan yahay weji ama baloogyo tilmaamo ah oo uu madax u noqon doono xarafka N. Baloog kastaa waa la tiriyey, maadaama ficillada mishiinada loo fuliyo si isdaba joog ah. Mashiinku wuxuu ixtiraami doonaa nambarada.
Isbeddelka ama cinwaannada: Koodhku waxa kale oo uu ka kooban yahay noocyadan qiyamka, sida F ee feedrate, S ee xawaaraha dunta, T ee xulashada qalabka, I, J, iyo K si loo helo xarunta of arc, X, Y, iyo Z dhaqdhaqaaqa faasas iwm.
Dhammaan waxay ku xirnaan doontaa nooca mashiinka. Tusaale ahaan, mashiinka CNC ee foorarsiga birta xaashida ah maaha mid la mid ah kan goynta. Ka hore ma laha dunta birta, uma baahna qaboojiye.
G iyo M koodhka tusaalaha miiska
Haddii aad eegto miiska sare, waanu kari karnaa tusaale u isticmaal xannibo si aad u sharaxdo waxa dhacaya. Tusaale ahaan, qiyaas inaad haysatid koodka soo socda ama barnaamijka CNC:
Qaybtan yar ee koodka CNC waxay u sheegaysaa mishiinka CNC, marka loo turjumo binary, in la sameeyo. falalka soo socda:
N3 waxay tilmaamaysaa inay tahay block saddexaad ee la fuliyo. Sidaa darteed, waxaa jiri doona laba blocks oo hore.
G01: samee dhaqdhaqaaq toosan.
X12.500: waxay u dhaqaaqi doontaa 12.5 mm dhidibka X.
Z32.000: waxay u dhaqaaqi doontaa 32 mm dhanka dhidibka Z. Xaaladdan ma jiri doono dhaqdhaqaaq Y.
F800: Quudinta waxaa lagu sameeyaa xawaare dhan 800 mm/min.
Dhinaca kale, luqadda ku habboon waa luqadda barnaamijka oo loo isticmaali doono kood dhex dhexaad ah oo u dhexeeya kii hore iyo code-ka mashiinka (code binary) oo ay fahmi karaan MCU. Waxaa lagu sameeyay shaybaarka MIT, oo uu sameeyay Douglas T. Ross. Waagaas, 1956, waxa loo isticmaali jiray in lagu xakameeyo servomechanisms, laakiin isticmaalkiisu hadda wuu baahay oo waxa uu noqday halbeeg caalami ah oo lagu xakameynayo tirooyinka.
Waa la tixgeliyey Tusmada ugu hooseysa ee CAM, oo la mid ah luqadaha kale sida FORTRAN. Koodhkan waxa u beddeli doona software-ka kombuyuutarta oo u beddeli doona tilmaamo taxane ah oo binary ah kaas oo lagu shubi doono xusuusta mashiinka CNC ee microcontroller si uu u fuliyo iyaga, isaga oo dhalinaya calaamadaha xakamaynta korantada si ay u dhaqaajiyaan matoorada iyo qalabka.
Luqadan APT waxay awood u leedahay xakamee xuduudo badan mashiinka CNC:
Xawaaraha Spindle-ka (RPM)
Spinal Daar ama Demin
joogsiga la qorsheeyay
Dhaqdhaqaaqa dhammaan jihooyinka suurtogalka ah (XYZ iyo ABC)
wareegyada ku celceli
Dabcan, kuwa ku shaqeeya mashiinnada CNC uma baahna inay ogaadaan luqaddan APT, maadaama software-ka hadda jira uu yahay mid dareen leh oo u oggolaanaya xakamaynta sahlan, si hufan oo APT ugu tarjumaysa isticmaalaha si uu u abuuro qaybta loo qaabeeyey faylka CAD/CAM. Si kastaba ha ahaatee, marna ma dhibayso in la ogaado inuu jiro iyo waxa uu yahay.
Maalmahan, mashiinnada CNC ee casriga ah ayaa horay u lahaa isdhexgalka garaafyada oo leh shaashado taabasho ah iyo kumbuyuutar isku dhafan oo si weyn u fududeeya isticmaalkiisa. Aad ayey u dareen badan yihiin, umana baahna waxbarasho badan. Iyada oo loo marayo darawal qalin ama xusuusta USB, waxay kuu oggolaanayaan inaad ku shubto naqshadda gabalka, si loogu qaabeeyo kombuyuutar kale oo madaxbannaan.
El cnc-control Waxay noqon doontaa midda mas'uulka ka ah tarjumaadda barnaamijka CNC, amarrada ay u kala horreeyaan, waxayna fulin doontaa dhaqdhaqaaqyada iyo hawlaha lagama maarmaanka ah, iyo waxyaabo kale.
Barnaamijka CAM / CAD
Un CAD ama software CAM Waxaa loo isticmaali doonaa in lagu sameeyo naqshadda ama qaabka waxa la doonayo in la soo saaro. Software-ka hadda jira wuxuu horeyba u ogolaanayaa inuu ka tago noocyadan qaababka barnaamijka CNC si toos ah.
Sida for DNC (Kontoroolka Tirooyinka Tooska ah), waa erey tilmaamaya kumbiyuutarka ay shabakadu ku xidhan tahay hal ama in ka badan oo mashiinada CNC ah. Sidan, barnaamijka CNC waxaa lagu wareejin karaa mishiinnada, ha ahaato Ehternet, ama dekedo casri ah oo casri ah sida dekedaha RS-232C, kuwaas oo wali lagu isticmaalo mashiinno badan oo warshadeed.
Codsiyada mashiinka CNC
mashiinada cnc waxay hayaan codsiyo ka badan inta aad malaynayso. Inta badan warshadaha iyo aqoon-is-weydaarsiyada, laga bilaabo kan ugu yar ilaa kan ugu weyn, waxay ku xiran yihiin hal ama in ka badan oo ka mid ah kooxahan. Xitaa waxaa guriga loogu isticmaali karaa shaqooyinka DIY-ga qaarkood ee kuwa sameeya.
Madadaalada (DIY iyo sameyeyaasha)
Sameeyayaal badan ayaa leh mashiinada CNC yar ee noocyada kala duwan ee guriga in la sameeyo qaar ka mid ah mashaariicda DIY. Waxa kale oo ay isticmaali karaan shakhsiyaad si ay u qabtaan hawlaha qaarkood guriga:
Samee qaybo dahab ah.
Mashiinka alaabta si loo abuuro qaybo ama qaybo.
Samee qaybo aad ku hagaajiso baabuurta ama noocyada kale ee qalabka marka alaabta la dhaafo aan la iibin.
Samee farshaxan farshaxan ama xardho.
Aqoon-is-weydaarsiyo iyo warshadaha wax-soo-saarka
Dabcan, qaybta xirfadleyda, labadaba aqoon-is-weydaarsiyada iyo warshadaha, Waxa kale oo aad u badan in la arko mashiinnada CNC, labadaba nijaarrada, dukaamada dayactirka, qaybaha wax soo saarka, warshadaha dharka, qaybta aeronautical, qurxinta, golaha wasiirada, iwm. Tusaale ahaan:
Goynta laysarka xaashida.
Dooro & Meel, ama si sax ah u dhigaan qaybaha ama qaybaha goobta kulanka.
Laacida baararka, tuubooyinka, taarikada...
leexinta ama shiididda alwaax.
Soo-saarka qaybaha gaarka ah.
Qaabaynta ama wax soo saarka wax lagu daro.
Abuuritaanka maqaar-galaha ama qalabka-saaraha si loogu isticmaalo caafimaadka.
Xusid gaar ah ayaa u qalma mashiinnada CNC ee sidoo kale loo adeegsaday qaybta sidii tartan iyo horumarsan sida tan warshadaha elektiroonigga ah iyo semiconductor. Mashiinnadani waxay qaban karaan hawlo badan, sida:
Semiconductor goynta wafer.
Samaynta weelasha kulaylka ee ka samaysan naxaasta ama aluminium blocks.
Abuuritaanka daasadaha/qaababka kombayuutarrada, telefishinnada, mobilada, iwm.
Dooro & Meesha aad ku dhejinayso qaybaha korka dusha sare ee looxa PCB ee meel loogu talagalay alxanka xiga.
Laser xaradhka calaamadaha iyo calaamadaha.
Si loo qaabeeyo muraayadaha.
Mashiinnada CNC: hagaha xakamaynta tirada
Prototyping iyo naqshadeynta CNC
Dhammaan noocyada mashiinnada CNC si waafaqsan isticmaalka iyo sifooyinka
Noocyada iyo sifooyinka lathe CNC
Noocyada mashiinnada wax-shiidka ee CNC
Noocyada CNC router iyo goynta CNC
Noocyada xaradhka laysarka
Mashiinnada kale ee CNC: qodista, Xulo & Goobta, alxanka iyo qaar kaloo badan
Sidee mashiinka CNC uga caawin karaa shirkadda
Hagaha Iibka: Sida Loo Doorto Mashiinka CNC ee ugu Fiican
Dayactirka mashiinnada CNC
Tilmaame qeexan oo ku saabsan dhagar-qabayaasha: waa maxay dhagar-qabeeyaha iyo waxa loogu talagalay
Mashiinnada CNC ee ugu fiican ee xilliga firaaqada iyo isticmaalka xirfadleyda
Qorshayaasha daabacaadda ugu fiican
Qorshayaasha goynta ugu fiican
Alaabta ugu fiican ee dherya-sameeyaha: kartoonnada, warqadaha, vinyl, iyo qaybo dheeri ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » CNC » Sida mashiinka CNC u shaqeeyo iyo codsiyada
Servo SG90: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan mishiinka yar ee korontada